Nahatonga Hetsika Hiarovana Ny Tontolo Iainana Ny Fanarenana Indray Ny Farihy Tranainy Tao Kathmandu · Global Voices teny Malagasy
Nahatonga Hetsika Hiarovana Ny Tontolo Iainana Ny Fanarenana Indray Ny Farihy Tranainy Tao Kathmandu
Voadika ny 14 Janoary 2018 16:59 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Ελληνικά, русский, বাংলা, Español, English
Ny farihy Rani Pokhari talohan'ny horohorontany tamin'ny taona 2015. Sary avy amin'ny mpisera Flickr Anup Adhikari. CC BY-NC 2.0
Anisan'ny kolontsaina sy fomban-drazana lehibe ireo farihy ao amin'ny Lohasahan'i Kathmandu sy ny lemaka atsimon'i Nepal. Raha voatahiry tsara ny farihy sasany ao amin'ny lohasaha, ny hafa kosa dia tafiditra ao anatin'ny fanorenana maoderina na nanjavona tanteraka noho ny tsirambina nataon'ny manampahefana.
Noritina i Rani Pokhari, ‘Ilay Farihin'ny Mpanjakavavy’, misy ny Tempolin'i Balgopaleswor manan-tantara ao afovoany, mba hanorenana indray ny tempoly. Nanapa-kevitra ny hanavao ny farihy iray manontolo ny manampahefana rehefa simban'ny horohorontany nandravarava tamin'ny taona 2015 ilay tempoly.
Ankehitriny, nivory ireo mpikatroka sy ny mponina ao amin'ny Lohasahan'i Kathmandu mba hamonjena ity farihy tranainy ao afovoan'i Kathmandu ity:
Tao anatin'ny taona vitsivitsy, nanao izany ho an'i Rani Pokhari isika. Sary roa nalaina teo amin'ny toerana iray.
Ny hatsarana sy ny lanjan'ny tantaran'i Rani Pokhari
Vakoka tany amin'ny taonjato faha-17 i Rani Pokhari ary noheverina fa naorin'i Mpanjaka Pratap Malla tamin'ny taona 1670 taorian'i Jesoa Kristy mba hampiononana ny Mpanjakavavy Anantapriya izay nalahelo noho ny fahafatesan'ny zanany faralahy.
Misokatra ho any daholobe indray mandeha isan-taona ny Tempoly Balgopaleswor ao afovoan'ny farihy, rehefa mitsidika ny tempoly mandritra Bhai tika, ilay ‘Fetiben'ny mpiray tampo’ amin'ny andro farany amin'ny fetiben'i Tihar, dimy andro fankalazana ny fetiben'ny hazavana Haindò ny olona tsy manana iray tampo. Misokatra ho an'ny daholobe ihany koa ny farihy mandritra ny Chhath fetiben'ny Haindò.
Rani Pokhari, tamin'ny taona 1919
Rani Pokhari. Volamena ny Tranainy : Rani Pokhari talohan'ny horohorontany (Bikram Era) tamin'ny taompolo 1990
Fantatra noho ny hakantony sy ny lanjany ara-tantara, voahodidina Ghantaghar (tilikambon'ny famantaranandro) sy ny Kolejy Trichandra , oniversite voalohany any Nepal atsinanana, ary ny Lisea Durbar, ny lisea voalohany ao Nepal andrefana ny farihy. Misy ny sarivongan'i Mpanjaka Pratap Malla sy ny zanany roa lahy mitaingina elefanta ao amin'ny morondrano atsimo. Tsikaritra eny rehetra eny ireo Tempoly natokana ho an'ireo andriamanitra sy andriamanibavy Haindò .
Adihevitra, Fanorenana Misavoritaka
Niteraka fifandonana teo amin'ny Departemantan'ny Arkeolojia ao amin'ny governemanta sy ny mponina ao an-toerana ary ny Tanàndehiben'i Kathmandu (KMC) izay manao ny asa ny fanarenana indray ilay farihy. Najanona ny asa fanorenana teo amin'ny tempoly rehefa nanao hetsi-panoherana manohitra ny fampiasan'ny orinasa ny fananganana varafasy ny mpikatroka.
Nitsikafona indray ny disadisa rehefa nanomboka nanamboatra ny rindrina varafasy manodidina ny farihy ny orinasa:
Nilaza ny KMC fa “hanatsara sy hanavao” ny Rani Pokhari izy ireo, ho asiana loharano misy feo sy jiro izany ary zaridaina sy fivarotana kafe. Manitsakitsaka ny Lalànan'ny Fiarovana ny Vakoka Tranainy Nepaley anefa izany izay milaza fa tokony hotehirizina amin'ny endriny tamim-boalohany ny toerana manan-tantara mihoatra ny 100 taona . “
Nitahiry rano nandritra ny 350 taona ny Rani Pokhari na dia tsy mbola nisy injeniera aza tamin'izany fotoana izany. Saingy mitaky asa goavana ny fitahirizana ny rano ao Rani Pokhari amin'izao fotoana izao ho an'ny famolavolana maoderina taorian'ny korontana tao Rani Pokhari izay nateraky ny fanarenana. Henatra lehibe.
Nanoratra tao amin'ny The Kathmandu Post i Sanjit Bhakta Pradhananga:
Teo ambony lakandrano voajanahary no nanorenana ny Rani Pokhari ary mihazona voajanahary ny rano ny tany misy azy, mihazona hatrany ny haavony ny loharano ao aminy ary mandefa ny rano mankany amin'ny vavam-bato toa an'i Teen Dhara sy ny Bhota Hiti kosa ny lakandrano ambanin'ilay tany. Tsy mbola ritra mihitsy ity farihy ity tao anatin'ny 350 taona na hoe nilaina navaozina indray.
Vavam-bato maromaro feno ranonorana izay nangonina tao anaty lakandrano ny ‘hiti’. Naorina teo amin'ny manodidina izany ilay farihy mba hamahanana ireo lakandrano sy hihazonana ny rano hikoriana mandritra ny vanim-potoana maina. Manome rano ho an'ny farihy, ny hitis ary ny toeram-pambolena ho an'ny fampiasana andavanandro sy ny fampidran-drano ireo rafitry ny lakandrano .
Mazava ho azy fa maro ireo olona no niahiahy momba ny fanarenana indray ny Rani Pokhari amin'izao fotoana izao indrindra ny amin'ny fampiasana vatokely .. saingy toa tsy miraharaha ny Ben'ny Tanànantsika .. tsy mila fanarenana aho satria mety hanimba ny vakokantsika izany… misy ny toerana sasany izay tsy tokony hokitihana.
Taorian'ny tabataba momba ny fanarenana indray, najanona ny asa tamin'ny taona 2016 ary nisy ny komity napetraka mba hanoro hevitra ny governemanta amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny farihy amin'ny endriny tany am-boalohany.
Satria mbola nitohy ny fifandirana tamin'ny fanemorana ny fanarenana ny Rani Pokhari, dia nilaza ilay antropolojista David Gellner fa mety hanampy amin'ny fanadihadiana momba ny fitantanana ny vakoka ara-kolontsaina manan-tantara ao Kathmandu ny adihevitra .